theZOMI: [mrsorcerer:37519] Fwd: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] သတိ…. ဤနေရာ ပိုင်ရှင်ရှိသည်
[mrsorcerer:37519] Fwd: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] သတိ…. ဤနေရာ ပိုင်ရှင်ရှိသည်
Subject: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] သတိ…. ဤနေရာ ပိုင်ရှင်ရှိသည်
by Wai Maw on Saturday, March 9, 2013 at 3:09am ·
အဲဒါက သွားရင်းလာရင်း အန္တရာယ် မလွယ်သာလို့ လယ်ကွင်းပြင်၊ ချောင်းရိုး၊ မြောင်းရိုး၊ တောစပ် လို နေရာတွေမှာ အခင်းကြီးအခင်းငယ် စွန့်ကြရတဲ့ အခါမျိုးမှာ လုပ်ငန်းမစတင်ခင် ဟိုဟိုဒီဒီ ကျီးကန်း တောင်းမှောက် ကြည့်ရင်းက လက်အုပ်လေးချီပြီး ' အရှင် (ကွင်းပိုင်၊ တောပိုင်၊ တောင်ပိုင်) မင်းကြီးခင်ဗျား … အမိုက်အမဲလေး ကို ခွင့်လွှတ်တော်မူပါ' လို့ ခပ်တိုးတိုးလေး တောင်းပန်တိုးလျှိုးပြီးမှ စိတ်ချလက်ချ ကိစ္စ ဆောင်ရွက် တတ်ကြရတာပါ။
ကျနော့်မိတ်ဆွေ ဦးလေးက ရေစက်တခုထောင်ထားပြီး ရပ်ကွက်အတွင်း ရေပေးပါတယ်။ တနေ့မှာ သူ့အိမ်ကို ရောင်းတော့မယ်ဆိုပြီး ကျနော့်ကို 'ခုနေ ငါ့အိမ်ရောင်းရင် ဘယ်လောက်ရနိုင်လဲ' မေးလို့ ကျနော်လည်း ကာလတန်ကြေး သိပ်မခန့်မှန်းမိတဲ့အတွက် 'သိန်း ၅၀ ကျော်တော့ ရမှာပေါ့ ဦးလေးရဲ့' … ပြီးစလွယ် ဖြေလိုက်တော့ သူက… 'ဟေ.. ငါ့အိမ် ဟိုဘက်နားက မီးတားမြေချိုင့်ကို သိတယ်မလား.. လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်က အရောင်းအဝယ် ဖြစ်တာ သိန်း (၈၀) ရတယ်ကွ။ ငါ့မြေကွက်က အိမ်သိပ်မကောင်းပေမဲ့ နှစ် ၆၀ ဂရန်ရှိတယ်။ ပါဝါမီတာ ရှိတယ်ကွာ.. သိန်း ၁၀၀ ကျော်မရရင် ဘယ်ရောင်းနိုင်မလဲ' တဲ့။
နေရာခငွေ တောင်းခါစမှာ ဈေးသည်တွေနဲ့ အိမ်ရှင် ခွန်းကြီးခွန်းငယ်ဖြစ်ကြသေးတယ်။ အိမ်ရှင်က ခပ်မာမာပဲ ပြောတယ်… 'ငါတောင်းတာ မပေးနိုင်ရင် ငါ့အိမ်ရှေ့မှာ လာမရောင်းနဲ့ … မကျေနပ်ရင် တိုင်ချင်ရာတိုင်' တဲ့။ သူက မြို့နယ်စည်ပင် လူကြီးနဲ့ ဘာတော်တယ် ညာတော်တယ် ဆိုလားပဲ….။ မိုက်ကြေးခွဲ တောင်းတယ်။ မတတ်သာတဲ့အဆုံး ဈေးသည်တွေ လက်လျှော့လိုက်ရတော့တယ်။